Nepali Christian Song | परमेश्‍वरले मात्र मानिसलाई अगाध माया गर्नुहुन्छ | with lyrics | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
Nepali Christian Song | परमेश्‍वरले मात्र मानिसलाई अगाध माया गर्नुहुन्छ | with lyrics
20 अगस्ट 2021
परमेश्‍वरले मानिसको उद्दारको लागि,
अन्तिम दिनहरूमा, देहधारण गर्नुहुन्छ
प्रेमबाट प्रेरित भई, उहाँ हरेक कार्य गर्नुहुन्छ।
यो प्रेमको आधार हो।
परमेश्‍वरले देहधारण गरि
भ्रस्टहरुलाई उद्धार गर्न अपमान सहनुहुन्छ।
उहाँले पिडा सहनुहुन्छ।
उहाँ आफ्नो असीम प्रेमको प्रदर्शन बारम्बार गर्नुहुन्छ।
परमेश्‍वर कुनै आत्मा भड्किएको चाहनुहुन्न।
मानिस आफ्नो भविष्यप्रति लापरवाह हुन्छ।
मानिसले आफ्नो जीवनको कदर गर्न जान्दैन।
तर उहाँले गर्नुहुन्छ। उहाँले मात्र मानिसलाई प्रेम गर्नुहुन्छ।
उहाँका वचनहरूले मलम लगाउछन् र प्रोत्साहन दिन्छन्।
उहाँका वचनहरूले न्याय गर्छन् र श्राप दिन्छन्, र प्रतिज्ञा गर्छन्।
उहाँका वचनहरु उहाँको प्रेमबाट प्रेरित छन्।
यहि नै उहाँको कार्यको सार हो।
किन यति धेरैले उहाँलाई पछ्याउँछन्?
किन तिनीहरूमा यति धेरै ऊर्जा छ?
किनकि उनीहरूले उहाँको प्रेम र मुक्ति देखिसकेका छन्।
उहाँ समयको पक्का हुनुहुन्छ। उहाँ कहिल्यै ढिला सुस्ती गर्नुहुन्न।
कसले तिमीलाई सबैभन्दा धेरै प्रेम गर्छ?
तिमी आफूलाई प्रेम गर्दैनौ‌।
तिमीले महसुस गर्छौ, परमेश्‍वरको प्रेम सबैभन्दा वास्तविक छ।
यदि परमेश्‍वरले देहधारण गरि,
मानिससंगै बसेर निर्देशन नगरेको भए,
तिनीहरूलाई उहाँको प्रेम बुझ्न गाह्रो हुन्थ्यो।
हो, परमेश्‍वरले मात्र मानिसलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। ओह, हो, उहाँ गर्नुहुन्छ।
उहाँले मानिसलाई यति प्रेम गर्नुहुन्छ।